COVID-19 reopening training: Xhosa - SmartStart
Ngaphambi kokuba uvule kufuneka wenze ezinye izinto ukuze uqiniseke ukuba inkqubo yakho ilungile kwaye ulungiselele indawo yakho. Nje ukuba ubukele ividiyo kwaye ufunde amanqaku, gcwalisa le mibuzo ukukhangela ukuqonda kwakho. Uya kuba nakho ukwenza kwakhona imibuzo amaxesha amaninzi njengoko kufuneka uphumelele kwaye uya kukhokelwa kwiimpendulo ezichanekileyo. Nje ukuba ugqibile ZONKE iQuizzes EZINTATHU ngempumelelo, ii-SmartStarters ziya kufumana isatifikethi sokugqiba. Okuhle kodwa! Ukuba uyasokola, cela umqeqeshi wakho akuncede.
Ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zivulwa kwaye ziqhutywa ngokukhuselekileyo nangawo onke amanyathelo okhuseleko e-COVID-19, urhulumente ufuna ukuba ubeke amanyathelo akhethekileyo azakunceda ukunciphisa umngcipheko wokosulelwa yiCoronavirus. Urhulumente ukhuphe iiNkqubo zokuSebenza eziMiselweyo kunye nemiyalelo ekhethekileyo ecacisa ukuba yintoni la manyathelo. Imigaqo yethu yokusebenza eqhelekileyo yeeNkqubo ze-ECD ngexesha loqeqesho lweCOVID-19 kukunceda uziqonde kwaye wazi ukuba zenze ntoni.
Sonke kufuneka sihlengahlengise ubomi bethu kunye nomsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuba sinceda ukuyeka ukusasazeka kweCoronavirus kwaye sihlale sikhuselekile. Iinkqubo ze-ECD zikwafuneka ukuba zilungelelanise iinkqubo zazo zemihla ngemihla kunye nemisebenzi yazo kwiimfuno ezintsha. Kolu qeqesho ufunda indlela yokulungelelanisa inkqubo yakho yemihla ngemihla ukuze uvumelane ne-COVID-19. Nje ukuba ubukele ividiyo kwaye ufunde amanqaku, gcwalisa le mibuzo ukukhangela ukuqonda kwakho. Uya kuba nakho ukwenza kwakhona imibuzo amaxesha amaninzi njengoko kufuneka uphumelele kwaye uya kukhokelwa kwiimpendulo ezichanekileyo. Nje ukuba ugqibile ZONKE Quizzes EZINTATHU ngempumelelo, ii-SmartStarters ziya kufumana isatifikethi sokugqiba. Okuhle kodwa! Ukuba usokola, cela umqeqeshi wakho akuncede.